Chọpụta ebe mmasị na Croatia | Akụkọ Njem
Croatia, ma ọ bụ Republic of Croatia bụ mba nke European Union nke bụ n'ezie touristy. Ọ bụrụ na anyị ga-ahụ ihe ndị enwere ike ịhụ na Kroshiya anyị ga-adarịrị ala ị na-ekwu maka ha. Ọ bụ ebe nwere obodo ochie mara mma, obodo mara mma na ọdịdị ala nke na-eju onye njem ọ bụla anya.
Na Croatia anyị na-ahụ a ogologo ndepụta nke ebe anyị kwesịrị ịga. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịme ya oge mbụ, anyị nwere ike ịchọ ụbọchị ndị ọzọ iji gaa Croatia, ebe ọ bụ na ọ bara ezigbo uru. Anyị ga-ahụ oghere ndị mara ezigbo mma ga-eme ka anyị cheta ihe anyị na-agaghị echefu echefu.
2 Asụsụ Polish
5 Plitvice Ọdọ
Zagreb bụ isi obodo Kroeshia na dị ka nke a ọ bụ otu n'ime obodo ya kachasị njegharị ma dị mkpa. N'ime obodo a, anyị nwere ike ịhụ katidral ya mara mma na agbata obi Kaptol nwere ụlọ elu Gothic abụọ. Ga-agagharị na mpaghara Gradec akụkọ ihe mere eme ya, ebe anyị nwere ike ịhụ Ọnụ thezọ Stonemá Nkume nke mgbidi ochie ahụ. Ahịa Dolac bụ ikuku na-emeghe ma n'ime ya anyị nwere ike ịchọta ngwaahịa nke mpaghara ahụ. A na-akpọ Green Horseshoe bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'obodo, ogige ntụrụndụ, ubi na ụlọ ochie ochie mara mma.
Nke a bụ obere obodo dị na mpaghara Istria. O doro anya na obodo a adịworị n'oge Gris oge ochie, ya mere ọ nwere ọtụtụ akụkọ ntolite. Nke mbụ anyị kwesịrị ịhụ na Pula bụ ebe amphitheater nke Rome. Ọ bụ nke kachasị na ụwa ma wuo ya malitere na 27 BC. Ihe ncheta ndị ọzọ anyị nwere ike ịhụ n'obodo ahụ bụ Ọnụ Gatezọ ofmá Hercules ma ọ bụ Arch nke Sergios nwere ogidi ndị Kọrịnt. Na nleta a anyị kwesịrị ịkwụsị site na Archaeological Museum nke Istria na Museum nke History nke Istria. Anyi agaghi anyi echefu temple nke Augustus, ihe bu ihe fodoro na oge ndi Rome.
Dubrovnik bụ otu n'ime ebe kachasị njem nlegharị anya na Croatia niile, nke a maara dị ka pealu nke Adriatic. E nwere ọtụtụ ihe a ga-eme n’obodo a. Banye obodo mgbidi site na Puerta de Pile a maara nke ọma bụrịrị kpochapụwo. Na nso ọnụ ụzọ ámá a bụ Stradun, isi n'okporo ámá nke obodo ahụ. Na obodo ị ga-ewe oge iji jee ije n'elu mgbidi na-enwe ọ theụ. N’etiti etiti Plaza de la Luza enwere ọtụtụ ụlọ nnọchi anya dịka Sponza Obí, Churchka San Blas ma ọ bụ ụlọ mgbịrịgba. A makwaara obodo a maka ụsọ mmiri, dị ka Banje ma ọ bụ Buza. Ọ bụrụ na ị bụ Fans nke Egwuregwu nke n'ocheeze, n'ezie ị nwere ike ịga njem nlegharị anya nke ebe ndị pụtara n'usoro.
Otu n'ime ihe ndị kasị akpali ihe nwere ike hụrụ na Split bụ Diocletian Obí. N'ime ya ị nwere ike ịhụ catacombs, nke bụkwa akụkụ nke usoro egwuregwu nke ocheeze. N’obodo, ị ga-agagharị na mpaghara mmiri, nke dị ezigbo mma. Ebe kachasị mma iri nri n'ụlọ nri ma ọ bụ ịchọta ụlọ ahịa. Anyị ga-ahụkwa ntinye nke njegharị na-eduzi gburugburu obodo ahụ. Na obodo a ị kwesịrị ịga leta visitlọ Nsọ nke Jupita, ụlọ nsọ oge ochie, ma ọ bụ Katidral nke St. Domnius, otu n'ime ụlọ Ndị Kraịst kacha ochie echekwara.
Ọ bụghị ihe niile dị na Croatia bụ obodo nwere ụlọ ochie na ụlọ arụsị. Ọ bụkwa obodo juputara na oghere ndị mara mma dị egwu. Otu na Iguzo n’elu ndi ozo bu mpaghara Plitvice Lakes. Ogige a dị na mpaghara Lika. O nwere ọdọ mmiri jikọrọ ọnụ nke iri abụọ, ihe dị ka iri itoolu na asatọ na ala nke jupụtara na ahịhịa ndụ ebe niile. Enwere ọtụtụ ụzọ site n'okporo ụzọ osisi ma ị nwekwara ike were obere ụgbọ mmiri iji ruo nso na mmiri mmiri ahụ. A na-atụ aro ihe abụọ a iji nwee obi ụtọ n'akụkụ mpaghara ọdọ mmiri ahụ.
Trogir dị na Dalmatian Coast. O nwere ụfọdụ ụlọ Baroque na Renaissance echekwara nke ọma. Na Trogir ị nwere ike ịnụ ụtọ obere ịgagharị. Katidral nke San Lorenzo bụ ngwakọta nke ụdị dị iche iche sitere na Baroque to Renaissance. Ihe ọzọ dị mkpa nke a ga-ahụrịrị n'obodo ahụ bụ Camarlengo Castle na ụlọ elu ahụ e jikọtara na mbụ na nnukwu ụlọ. Juan Pablo II Square bụ ebe kachasị dị na ya ma n'ime ya anyị ga-ahụ katidral, Ducal Palace nke narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ Cipico Obí. Nke a obere obodo bụ a jụụ ebe, efep isi njem nleta emmepe, n'ihi ya otu n'ime ihe anyị ga-eme bụ na-enwe ya obere ma jụụ n'okporo ámá. A na-eleta obodo ochie ya na ọkara ụbọchị ma anyị nwere ike ịchọta mbara ala iji zuru ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Croatia
Antwerp, ebe njedebe na Flanders
Ihe ị ga-ahụ na Florence n'ime ụbọchị atọ